Ejypta: Nolavin’ny tribonaly miaramila ny fampiakarana fitsarana nataon’i Alaa Abdel · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Marsa 2019 3:16 GMT
Nolavin'ny tribonaly miaramila ao Kairo tamin'ny (3 Nov) ny fampiakarana fitsarana napetrak'ilay bilaogera menavazana Alaa Abdel Fattah ho famotsorana azy eo am-piandrasana ny fanadihadiana. Nogadraina tamin'ny 30 Oktobra nandritra ny 15 andro i Abdel Fattah rehefa tsy nety nanaiky hofotoran'ny tribonaly miaramila, ary nanizingizina ny zony hohadihadian'ny fitsarana sivily.
Nilaza ireo mpisolovava an'i Abdel Fattah, ankoatra ny zavatra hafa, fa tsy atahorana ny handosirany satria tany San Francisco izy tany am-boalohany raha nampiantso azy ny fitsarana, ary niverina andro vitsivitsy taty aoriana izy mba hiseho eo anoloan'ny fitsarana ny ampitson'iny.
Noho izany dia hita mazava fa tsy miezaka ny handositra ny fitsarana izy. fa manizingizina ny zony amin'ny maha-sivily mba hotsaraina eo anoloan'ny fitsarana sivily, indrindra fa voampanga amin'ny raharaha Maspero izay hanadihadiana azy koa ny miaramila.
Taorian'ny fandàvana ny fampakarana ny fitsarana, dia nafindra tany amin'ny fonjan'i Tora i Abdel Fattah, izay tsara kokoa ny fepetra tsy tahaka izay nisy azy tany am-boalohany. Namoaka lahatsoratra tao amin'ny gazety Al Shorouk [Arabo] sy Guardia [amin'ny teny Anglisy] izy izay nanazavàny fa tsy manaja ny maha-olombelona tsotra izao ny fonja ihazonana ireo mampiakatra fitsarana, ary nanambara koa fa ny fampidirana am-ponja azy dia fiverenan'ny andron'i Mubarak taorian'ny revolisiona. Efa nogadraina nandritra ny fitondrana Mubarak nandritra ny 45 andro i Abdel Fattah tamin'ny taona 2006 rehefa avy nandray anjara tamin'ny hetsi-panoherana ho fanohanana ny fitsarana tsy miankina.
Navoaka tao amin'ny blaogy efa nahazo loka sombin-tsinin'i Manal sy Alaa (manalaa.net), izay iandraketan'ity bilaogera ity sy ny vadiny ny iray amin'ireo bilaogy voalohany sy malaza indrindra any Ejipta sy ny tontolo Arabo ny lahatsoratra bilaogy faharoa nataon'i Abdel Fattah [fandikan-teny azo jerena ato]. Tao amin'ny lahatsorany faharoa nampigadra azy, nilaza i Alaa fa nomena fifampiraharahana ho famotsorana azy izy raha mitsahatra amin'ny famelezana ny Field Marshal Mohamed Hussein Tantawi, filohan'ny Filankevitra Faratampon'ny Tafika Mitam-piadiana, eo amin'ny fitondrana ankehitriny ao Ejipta saingy nolaviny izany.
Tamin'ny fanamarihana manokana, naneho fankasitrahana mahasadaikatra i Alaa noho ny fangatahana mba hafindra any amin'ny fonja manaja ny maha-olona kokoa, ka tsy maintsy mandao ireo namana niray-efitry ny fonja azy. Nilaza tamin'ireo mpamaky azy izy fa na dia sahy nanatrika ny fonja aza izy, dia tsy sahy maheno ny hevitry ny vadiny bevohoka sivy volana, Manal, mikasika ny fanapahan-keviny hangina eo anoloan'ny mpampanoa lalàna miaramila, izay fantatr'izy ireo fa mety hitarika tokoa any amin'ny fanagadrana. Fantany fa hanohana azy ihany izy (ny vadiny) na dia izany aza, hoy izy. Nofaranany tamin'ny fankasitrahana ny bilaoginy, nahazo herim-po kely izy noho ny fitaoman-dreniny, ny zandriny vavy ary ny vadiny, izay anisan'ny tena mafy indrindra ny fisarahana amin'izy ireo noho ny fanagadrana.